अन्तराष्ट्रिय – ZoomNP
Breaking News अमेरिका-उत्तरकोरिया तनाव उत्कर्षमा, युद्दको नजिक पुगेको खुलासा गर्दै ट्रंपले दिए नसोचिएको ठुलो युद्द हुने चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणु र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका कारण एउटा ठूलो युद्ध हने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कूटनीतिक माध्यमबाट उत्तर कोरियासँगको विवादको हल गर्न चाहेको तर यो प्रयास कठिन देखिएको बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा उत्तर कोरिया र अमेरिकाका गतिविधिले विश्वमै ठूलो द्वन्द्वको खतरा बढ्दै गएका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो ।
केही दिनअघि मात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले लगातार परमाणु क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरे उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए । अमेरिकासँग चर्को विवाद...
संभावित युद्दको त्रासमा रहेको विश्व र अमेरिकालाई समेत कडा झट्का दिदै उत्तरकोरियाले आज गर्यो अर्को ब्यालेस्टिक मिसाइल परिक्षण
१६ वैशाख, एजेन्सी। यद्धका घनिभुत सन्त्रासका बीच उत्तर कोरियाले ब्यालेस्टिक मिसाइल परिक्षण गरेको छ । दक्षिण कोरयाली सेनाले योनह्याप समाचार समितिलाई यो जानकारी दिएको हो।
दक्षिण कोरियाली सेनाले मिसाइल छुटेको केही समयमै हावामा विष्फोट भएको पनि जानकारी दिएको छ। यसैगरि समाचार एजेन्सी रोयटर्सले अमेरकी सरकारको एक सुत्रलाई हवाला दिँदै उत्तर कोरियाको पछिल्लो परिक्षण असफल भएको जानकारी दिएको छ।
दक्षिण कोरियाली सेनाले दिएको जानकारी अनुसार मिसाइल राजधानी प्योडग्योङबाट उत्तरमा रहेको प्योनग्योन प्रान्तबाट परीक्षण गरिएको थियो । यो मिसाइल परीक्षणको बारेमा...
क्षेत्रीय रुपमा पाकिस्तानलाई एक्लाउन भारतले अघि सारेको उपक्षेत्रीय सञ्जालको अवधारणालाई भुटानले अस्वीकार गर्ने भएको छ।
बढाउन भएको प्रयास भुटानी सांसदले अस्वीकृत गरिदिएको हो। भुटानको यो निर्णयले पाकिस्तानलाई एक्लाएर उपेक्षत्रीय नेतृत्व लिने नरेन्द्र मोदी सरकारको रणनीतिलाई धक्का पुगेको छ।
उर्जा, सडक, रेलको साथै साझा सुख्खा बन्दरगाहको खाका सहित बनेको बीबीआइएनबाट भुटानले बाहिरिने निर्णय गरेको हो। अब परियोजनामा नेपाल, भारत र बंगलादेश मात्र बाँकी रहेका छन्। भुटान बाहिरिएको अवस्थामा नेपाल र बंगलादेशलाई कसरी साथमा लिएर जाने भनेर भारतले रणनीति...
अमेरिका-उत्तरकोरिया तनावले झस्कियो विश्व, चीनको प्रशंसा गर्दै ट्रंपले दिए उत्तरकोरिया बिरुद्द सैन्यबल प्रयोग गर्ने चेतावनी
अमेरिका, १५ बैशाख । उत्तर कोरियाको परमाणु गतिविधिलाई लिएर अमेरिकाले उचित जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ । सैन्य बल प्रयोग गरेर भए पनि उत्तर कोरियाको निसस्त्रीकरण कार्यक्रम रोकिछाड्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको हो ।
उत्तर कोरियाले कुनै पनि अवस्थामा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न सक्ने आशंकाबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस्तो चेतावनी आउनुले सर्वत्र चासो बढेको छ । समाचार संस्था रोयटर्ससँगको विस्तृत अन्तर्वार्ताका क्रममा ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर कडा जवाफ दिने र गम्भीर समस्या निम्तिने बताएका हुन् ।
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाब उच्च, किमले दिए आणविक हतियार प्रयोग गरेर अमेरिका र उसको जनता खरानी बनाउने चेतावनी
एजेन्सी । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाब बढी नै रहेको छ । तेस्रो विश्वयुद्ध विश्व् हुने हल्लाले विश्व त्रसित समेत रहेको छ ।पछिल्लो समय अमेरिकाले सैन्य बलमा दिएको जोड र उत्तर कोरियाले गरेको सैन्य शक्ति प्रदर्शनले पनि धेरैलाई त्रसित बनाएको हो । यसैबीच अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच युद्ध भएमा आणविक हतियारको प्रयोग हुने मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
उत्तर कोरियासँग सबैभन्दा शक्तिशाली बम ‘हाइड्रोजन बम’ आफ्नो आर्सनलमा रहेको र उक्त बम जतिबेला पनि प्रक्षेपण गर्ने गरि तयारी...
अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल मा शक्तिशाली बम विस्फोट, यस्तो छ ताजा अवस्था
बैशाख । सिरियाको राजधानी दमासकसनजिकै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार बिहान सबेरै भीषण विस्फोट भएको बिशेष कारण नबताइ मानव अधिकार समूहले जानकारी दिएको छ ।
विस्फोटन भीषण भएको यसको आवाज दमासकसबाट नै सुनिएको सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युम्यान राइट्सले जानकारी दिएको छ । सिरियाको राजधानी दमासकसबाट २५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्दछ ।
युद्धग्रस्त यस देश सिरियाको सुचना स्रोतको रुपमा रहेको बेलायतसँगआवद्ध अब्जरभेटरी यस विस्फोटनको पुष्टि गर्दै यो विमानस्थल भित्रभने नभएको प्रष्ट पारेको छ । विस्फोटनको कारण भने प्रष्ट नभएको अब्जरभेटरीका प्रमुख अब्देल...
घटेन अमेरिका-उत्तरकोरिया तनाव: आक्रामक बन्दै अमेरिका अटेरी बन्दै उत्तरकोरिया, यस्तो छ ताजा अवस्था!
एजेन्सी– उत्तर कोरियासँगको तनावबीच अमेरिकाको मिसाइलमार्फत लेस पनडुब्बी यु.एस.एस मिशिगन मंगलबार दक्षिण कोरिया पुगेको छ । न्युज च्यानल सीएनएनको रिपोर्टका अनुसार अमेरिकाको नौसेना पनडुब्बी मंगलबार कोरियाको तटवर्ती शहर बुसानमा पुगेको हो । मंगलबार उत्तर कोरिया भने आफ्नो सेनाको ८५ औ वर्षगाठ मनाइरहेको थियो । उत्तर कोरियाले पश्चिमी महासागर इलाकामा जापानको दुई युद्धपोतसाथ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिइरहेको अमेरिकालाई बिमानबाहक पोत युएसएस कार्ल विंसनलाई डुबाइ दिने धम्की दिएको थियो ।
कोरियामा तैनाथ अमेरिकी नौसेनाको इकाई ‘युएस नवल फोर्सेज...
शक्तिशाली राष्ट्रहरु बीच बढ्दो तनाव: रुसले दियो परमाणु युद्दमा होमिय बेलायतको नामोनिशान मेटाइदिने चेतावनी
१२ वैशाख, एजेन्सी। भ्ल्यादमिर पुटिनसंग परमाणु युद्धमा होमिए बेलायतको नाम निशान नरहने एक रुसी सांसदले चेतावनी दिएका छन्। बेलायतका रक्षा सचिव सर माइकल फेलोनले ‘सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा, हामीले स्पष्ट गरिदिएका छौ कि तपाइहरुले परमाणु हतियारको पहिलो प्रहार गर्नसक्नुहुन्न’ भनी अभिव्यक्ति दिएपश्चात रिटायर्ड कर्नेल फ्रान्टस् क्लिन्टसेभिचले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। यी रुसी सांसदले बेलायतको क्षेत्रफल ठूलो नभएको जनाउँदै उसले आक्रमण गरे जवाफमा रुसले परमाणु बमले एकैपटकमा बेलायत समाप्त पार्न सक्ने बताए।
अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा बिष्फोट ५को मृत्यु ८ घाइते, रक्षामन्त्री र सेनाप्रमुख द्वारा राजिनामा
काठमाडौं । अफगानिस्तानको खोस्ट प्रान्तमा रहेको अमेरिकी सेनाको एउटा अखाडामा २४ अप्रिलमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परी कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको र आठ जना घाइते बनेको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोले जनाएको छ ।
खोस्ट प्रान्तका प्रहरी प्रमुखका अनुसार उक्त हमला खोस्ट सहरमा रहेको एउटा चोकमा भएको थियो । आक्रमणकारीले गाडीमा राखिएको बम विस्फोट गराएको थियो । उक्त घटनामा आक्रमणकारीका साथै चार सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ भने ६ सुरक्षाकर्मी र २ महिला घाइते भएका छन् । विदेशी सैनिकहरूको...
बढ्दो छ अमेरिका-उत्तरकोरिया तनाव: अमेरिकी ‘वारशिप’ दक्षिणकोरिया आइपुगेको खबर संगै उत्तर कोरियाले गर्यो यस्तो फायरिंग!
१२ वैशाख, एजेन्सी। आफ्नो सेनाको वार्षिकोत्सवको दिन पारेर उत्तर कोरियाले ठूलो ‘लाइभ-फायर’ अभ्यास गरेको छ। सम्भावित उत्तर कोरियाली कदम मध्यनजर गर्दै दक्षिण कोरियाको तटमा आज अमेरिकी पनडुब्बी पुगेको खबरसंगै उत्तर कोरियाले फायरिङ गरि अभ्यास गरेको खबर आएको हो। अमेरिकाको एअरक्राफ्ट क्यारिअर उत्तर कोरिया तर्फ बढीरहेको र अमेरिकाले आजै युएसएस मिचिगन पनडुब्बी दक्षिण कोरियाको तटमा उतारेसंगै सेनाको वार्षिकोत्सव मनाउन उत्तर कोरियाले शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । उत्तर कोरियाले परमाणु कार्यक्रम रोक्न इन्कार गरेको विषयमा दक्षिण कोरिया, जापान...